I-Taskade: Umphathi Wemisebenzi Yesikhathi Sangempela nge-Video and Collaborative Editing | Martech Zone
Kule nyanga edlule, ngacelwa amafemu amabili ahlukene ukuthi ngisebenzise uhlelo oluthile lokuphatha kumaphrojekthi ethu. Bobabili bayesabeka. Beka ngokusobala; Ukuphathwa kwephrojekthi okubulala umkhiqizo wami. Izinhlelo zokuphathwa kwamaphrojekthi kufanele kube lula ukuzisebenzisa uma ufuna amaqembu akho akhiqize. Ngiyazisa amapulatifomu alula wokuphathwa kwemisebenzi, futhi kunjalo I-Taskade yaklanywa.
I-Taskade uhlelo lokusebenza lokusebenzisana ngesikhathi sangempela semibono yakho, izinhloso, nemisebenzi yansuku zonke. Hlela imicabango yakho, wenze izinto, ngokushesha futhi ngobuchule. Izinhlu zokubheka okukhona nokungekho, amanothi, izinhlaka, sikubhalile.
I-Taskade iyazikhangisa njengokuguquguquka, okuhle, nokujabulisayo… ngezici zokubambisana zangempela:
Xoxa - xoxa, sebenzisana, futhi uhlele uhlu lwemisebenzi ngesikhathi sangempela.
ukuqhutshwa komsebenzi - hlela futhi wenze ngezifiso uhlu lwakho lomsebenzi ukufanisa nendlela osebenza ngayo.
Indawo yokusebenza -a indawo yokusebenza iqoqo lohlu noma amanothi ongamema abanye ukuthi bajoyine.
Amathimba - nika imisebenzi, wabelane ngamanothi, futhi ulandele inqubekela phambili yeqembu.
Izibonisi - uthole inqubo yokusebenza ephindaphindwayo? Layisha esinye sezibonisi zeTaskade ukuqala iphrojekthi yakho.
Okuhle kunakho konke, i-Taskade inayo izicelo ngedivayisi yakho yeselula ye-iOS ne-Android, noma i-Mac yakho noma i-Windows desktop. Babuye bakha izandiso ezinhle kuzo zombili i-Chrome neFirefox. I-Taskade okwamanje khulula - ngenguqulo yePro iyeza maduze.
Tags: izinhlelo zokusebenza zesiphequluliisiphequluli sesandisoithuluzi lomsebenzi wamahhalaIzinhlelo zokusebenza zeselulaUkukhiqizauhlu lwemisebenziukuphathwa komsebenzii-taskadeukuqhutshwa komsebenziindawo yokusebenzela